Blog Reader: [ကြိုးမဲ့စွန်၏ ရင်ဖွင့်သံစဉ်များ] 1 New Entry: ကျွန်တော်နှင့် တခါက ချစ်သောကမ္ဘာမြေ
[ကြိုးမဲ့စွန်၏ ရင်ဖွင့်သံစဉ်များ] 1 New Entry: ကျွန်တော်နှင့် တခါက ချစ်သောကမ္ဘာမြေ
အပူချိန် အနုတ် ၂၀ ဒီဂရီအထိ ကျဆင်းနေသော ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ မှောင်စပျိုးအချိန် ၄ နာရီခန့်တွင် ကျွန်တော်သည် မော်စကိုတစ်မြို့လုံး အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက်ညံအောင် ပစ်ဖောက်နေကြကုန်သော မီးရှုးမီးပန်း ဗျောက်အိုးများကို အခန်းပြတင်းပေါက်မှ ရှုစားနေခိုက် ….. " ဟတ်ပီးနယူးရီးယားပါ မစ္စတာဥာဏ် " ဟူသော အသံဆိုးကြီးဖြင့် အခန်းတွင်းသို့ ၀င်လာသော မိတ်ဆွေကြီး အောင်မှူးကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ အောင်မှူးကား မုဆိုးမအိမ်သို့ အလစ်ဝင်ပြီး ထမီသုတ်မည့် သူခိုးကဲ့သို့ ကုပ်ချောင်းချောင်း ပုံစံဖြင့် အခန်းထဲသို့ ရောက်လာပေ၏။ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမပါ ဗြုန်းစားကြီး ရောက်လာသောကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက် သကဲ့သို့ လန့်ဖြန့်သွားမိကာ "နွားရူးပဲ ရီးယား ရီးယား၊ နွားကောင်းပဲ ရီးယား ရီးယား၊ ကြိုက်တာသာ ရီးယားပေတော့ .. ဒါနဲ့မောင်ရင် ကျုပ်အခန်းထဲက သတိပေးစာကိုတော့ ဖတ်မိပါတယ်နော်" ဟု ပြန်ပြောလိုက်ကာ (ပုလင်းမပါ မလာရ၊ လူသာ မလာပါနှင့် ပုလင်းပါ ယူလာပါ) ဟူသော သတိပေးစာကို လက်ညိုးထိုးပြလိုက်မိလေသည်။ အောင်မှူးကား သူ့မူပိုင်ဖြစ်သော ပြီတီတီမျက်နှာပေးတွင် စပ်ဖြီးဖြီး အမူအရာကို ထပ်မံ ပေါင်းစပ်လျှက် သူ့လွယ်အိတ်ထဲက Red Lebel တစ်လီတာ ပုလင်းကို ထုတ်ပြလေမှ ကျွန်တော့်မှာ အလုံးကြီး ကျသွားလျှက် "အို …. မိတ်ဆွေကြီး သင့်အား မျှော်နေသည်မှာ ကြာပါပကော " ဟု ပြောမိကာ ကဗျာကယာ နေရာထိုင်ခင်းပေးရလေသည်။ အောင်မှူးကား ပုလင်းသာမက သူရေးထားသည့် "ကျွန်တော်နှင့် တခါက ချစ်သောကမ္ဘာမြေ" ဆိုသည့် ပို့စ်တစ်ခုကိုပါ ကျွန်တော့်အား လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလေသဖြင့် မိတ်ဆွေကြီးအောင်မှူး၏ ကြောင်ကွက်များကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်နေကြကုန်သော ချစ်မိတ်ဆွေများ ခံစားနိုင်ရန် အလို့ငှာ တင်ပေးလိုက်ရပါသတည်း။ ခံစားကြည့်ကြပါကုန်။ ချီးကျူးစရာ ရှိပါက တင်ပေးသော ကျွန်တော့်ကိုသာ ချီးကျူးကြပြီး အပြစ်တင်စရာများ ရှိပါက စာရေးသူ မစ္စတာအောင်မှူးကိုသာ အားမနာတမ်း ဆူကြဆဲကြပါကုန်။ ကိုဥာဏ်(စက်မှု)
ညှိနှိုင်းကြရင်းနဲ့ ဘယ်သူ တင်ပြလိုက်သလဲတော့ မသိဘူး။ ဖျော်ဖြေရေး ကိစ္စလုပ်ဖို့ပါ ဖြစ်လာကြပါရောဗျို့။ ကျောင်းမှာ ဂီတဆရာလုပ်တဲ့လူက အဆိုကောင်း အတီးကောင်း။ ဂီတချိန်ဆို အစပိုင်းတုန်းက ဆရာက မယ်ဒလင်တီး၊ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေက ကိုထွန်းရွှေရဲ့ မြတ်ဘုရား ရွှေတိဂုံတွေ ဘာတွေကို လိုက်ဆိုရတာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကီးဘုတ်အသေးစား အော်ဂင်လေးနဲ့ ခြောက်လုံးပတ်လေး၊ လင်ကွင်းလေး စည်းးလေး ၀ါးလေး စုံလာပြီး ဂီတခန်းဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်လာတော့ ဆရာကလည်း ဟုတ်တယ် ခုလို စုံညီပွဲမျိုးမှာတော့ ဂီတပွဲလေး မပါရင်ဖြင့် လူရိုသေ ရှင်ရိုသေတောင် မဖြစ်တော့သယောင် ထလုပ်ရောဗျို့။ ဒီတော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကလည်း ဂီတဆရာကို " ခင်ဗျားသာ ကြည့်စီစဉ်ပါ " လို့ ဆိုတော့ ဆရာက သူ့လက်ရင်း လက်ရွှေးစဉ်တွေ ( ကျွန်တော် အပါအ၀င်နဲ့ပေါ့ ) နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြီးး လုပ်ကြမယ် ဖြစ်လာပါရော။
ကျွန်တော်တို့က မြန်မာသံကို စိတ်မပါဘူး မဟုတ်ပေမယ့် ခုခေတ် ဆိုနေကြတဲ့ မြန်မာသံ ဆိုတာတော့ သိပ်ကြည့်ရကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကြိုက်ချင်းကြိုက်ရင် ကိုမင်းနောင်တို့၊ စန္ဒယား လှထွဋ္ဋ်တို့၊ ကိုတင်လှိုင် ကိုသန်းလှိုင်တို့လောက်မှ ပြေးကြိုက်ကြတာကိုး။ ဆရာရဲ့ လက်ရင်း တပည့်ထဲ ထည့်ရတဲ့ အကြောင်းကလည်း တခါသားမယ် ကျွန်တော်က ကိုမင်းနောင်ရဲ့ ဂျင်မလေးဂျမ်း ကို စာရွက်နဲ့ရေးလာပြီး ဂီတချိန်မှာ ရွတ်တွတ်တွတ် ဆိုပြလိုက်တော့ ဆရာက " မင်းက ဘယ်သံရော၊ ညာသံရော ဖြစ်တယ် " ဆိုပြီး မြှောက်ပြောရင်းနဲ့ ဖြစ်လာတာလေ။ ( အတည်ပြောတာနော် )
ဆိုတော့ကာ ၀ိုင်းလေး ဘာလေးနဲ့ လုပ်တာထက် ကျွန်တော်တို့က မြန်မာသံရော၊ ခေတ်ပေါ် စတူဒီယိုပါ ဆိုလို့ရအောင်ဆိုပြီး ကာရာအိုကေ လုပ်ဖို့ အတွန့်တက်ကြရော။ ဆရာကတော့ သူ့အော်ဂင်လေးနဲ့တင် ဒူချက် ဒူချက်ရော၊ တခြား ဂရမ် ဘိလေးတွေ ထည့်ပြီး လုပ်ရင် ဖြစ်ပါတယ် ပြောနေသေးတာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ကာရာအိုကေမှ ကာရာအိုကေ ဖြစ်နေလေတော့ ဆရာခမျာ " သံဃာအား ဘုရား မဆန်သာ " ဆိုသလိုပဲ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ပြောထားတဲ့ ဖျော်ဖြေ၀ိုင်းလေးလည်း ဖြစ်အောင် သူလည်း စင်ပေါ်တက်ပြီး အော်ဂင်တီးရအောင် ကာရာအိုကေရော မြန်မာသံရော ဖြစ်အောင် စက်တွေ ဘာတွေ ငှားရတော့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီနေ့လည်း ရောက်ရော ကျောင်းရဲ့ စာသင်ဆောင်တွေနဲ့ ရေစင်ကြားက ပေ ၆၀ လောက် ရှိတဲ့ တမာပင် အုပ်အုပ်လေးရှိတဲ့ မြေကွက်လေးမှာ ပီပါစည်ပိုင်းလေး ၆ လုံးလောက်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်းပြားတင်ပြီး ဘလက်ဘုတ်ပေါ်မှာ " တို့ကျောင်းသာယာ ကာရာအိုကေ မြန်မာသံ " ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးနဲ့ စင်လေး ဖြစ်လာရော။ အဲဒီတုန်းက တီဗီကလာနေတဲ့ ဆိုကြမယ် ပျော်ကြမယ် ကလည်း ခေတ်စားနေတာကိုး။ သီချင်း ဆိုချင်ရင် ကာရာအိုကေ တစ်ပုဒ်ကို ၃၀၀ ကျပ်၊ မြန်မာသံဆိုရင် ၁၀၀ ကျပ်တဲ့။ မြန်မာသံ ဆိုရင် ဆရာက တီးပေမယ်။ ကာရာအိုကေဆို ကိုယ့်အခွေနဲ့ ကိုယ် လာဆို။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ တောမြို့မှာ တိပ်ခွေတွေ လောက်သာ ရှိသေးတာဆိုတော့ ကာရာအိုကေ သီချင်းခွေ ဆိုတာကလည်း အတော်ရှာယူရတာ။
ဆိုမယ့် လူကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဘာသီချင်း ဆိုကြမလဲ ဆိုတာက ကိစ္စရှိလာပြန်ရော။ ခုလို လူအများကြီးနဲ့ စင်ပေါ်တက်ဆိုဖို့ ဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာမကြေ လောက်ပဲ ရှိတာ။ နောက် စောဘွဲ့မှူး အလွမ်းမပြေ ထဲက ဆိုတဲ့ မှားတဲ့ဘက်မှာ မျိုးပေါ့။ အဲဒီလို ရွေးကြတော့ အဲဒီခေတ်က ပေါက်နေတဲ့ ဘစ်ဖိုက် (BIG FIVE) ရဲ့ " ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ " ကို ဆုံးဖြတ်ကြရော။ အဲဒီအခွေကလည်း ဟိုသူငယ်ချင်းဆီကပဲ ငှားရတာ။ အခွေနောက်ဆုံးမှာ တီးလုံးသံလေးတွေကို Instrumental တီးသလိုမျိုး ပါနေတော့ ဆိုလို့ရတာပေါ့။ ဒါနဲ့ မနက်ဖြန် ဆိုမယ်ဆို ဒီနေ့လို နေ့မျိုးမှာ တနေ့လုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်မှာ သီချင်းတိုက်ကြရော။ တိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း သီချင်းကို ကက်ဆက်နဲ့ ဖွင့်ပြီး နောက်ကနေ လိုက်ဆိုကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အ၀င်အထွက်ကလေးတွေ၊ အသံနေ အသံထားတွေက အစ လေ့ကျင့်ရတာပေါ့။ စပွန်ဆာ သူငယ်ချင်းကလည်း လာကြည့်ပြီး ပျော်တပြုံးပြုံးနဲ့။
ကဲ … မထူးတော့ဘူး။ နည်းနည်းတော့ ကျုပ်ကျက်လိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားမိပြီး စက်ကိုင်တဲ့ စက်ဆရာ ဆီ ချဉ်းကပ်ရတော့တယ်။ သူ့အနားရောက်တော့ သူ့စားပွဲပေါ်မှာက ကျွန်တော်တို့ဆိုမယ့် " ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ " လေး တစ်ခွေတည်း ရှိတယ်။ စက်ဆရာအနားကပ်ပြီး " အကိုကြီး … ထမင်းဆာနေပလား " ပေါ့။ " လိုအပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးပါ့မယ် " ပေါ့။ ကပ်ရောတော့တာ။ ဒီတော့မှ စက်ဆရာကလည်း " အိမ်သာ သွားဦးမယ်ကွာ၊ မင်းတို့ ကြည့်ထားလိုက် " ဆိုပြီး ထရော။ အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက် တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်တို့တော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကတာ့ ချက်ချင်းကို မျက်နှာတွေ ၀င်းပသွားလိုက်တာ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါ ချက်ချင်းရလိုက်သလိုပဲ။ ဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ထားမှာပေါ့ ဆိုပြီးတော့ ဇွတ်ကို နှင်တော့တာ။ ဒါပေမယ့် သူမထခင်တော့ သေချာအောင် မေးရတာပေါ့။ ကာရာအိုကေ ဆိုချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့။ သူကလည်း ဘယ်ထဲကို အခွေထည့်၊ ဘယ်ခလုပ်နှိပ်ပေါ့။ ရှင်းပြနေတုန်း ဒီက ကောင်တွေ နားထောင်နေတာများ လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာနဲ့ လက်ကလေးတွေတောင် ပိုက်ထားလိုက်သေး။
စက်ဆရာ ထသွားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ကီးဘုတ်နဲ့အသံချဲ့စက် ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးကိုရှာ၊ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပြီးတာနဲ့ အဲဒီကြိုးကို ပလက်ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်။ မြန်မာသံတွေကို မုဒ် အပြည့်နဲ့ တီးနေတဲ့ ဂီတဆရာခမျာ နောက်တစ်ပုဒ် မဆိုခင်လေး ကီးဘုတ်ကို စမ်းတဲ့ အနေနဲ့ လက်ကွက်တွေ နှိပ်ပေမယ့် အသံက မထွက်တော့ဘူး။ အောက်က ကလေးများကလည်း နဂိုကတည်းက နားဒုက္ခဆင်နေရတာ အခုလို အသံလည်း တိတ်သွားရော " ဟေး " ကနဲ့ အော်လိုက်တာမှ တစ်ကျောင်းလုံးကို ညံထွက်သွားတာ။ ဂီတဆရာလည်း ထိုင်မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုပြီး ပြာပြာသလဲ ထလာတာ။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ဘယ်ကြိုးတွေနဲ့ ဘယ်လို ဂျွိုင်းထားမှန်း သိမှ မသိတာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က " စက်က ပျက်တာမဟုတ်ဘူး ဆရာ အတီးများလို့ ကီးဘုတ်က ပူပြီး ပျက်တာနေမှာ၊ မယုံရင် ကျွန်တော်တို့ ကာရာအိုကေ ဆိုပြမယ် ဆိုပြီး ပြောလည်းပြော အခွေလည်း ကက်ဆက်ထဲထည့် စင်ပေါ်လည်း အတင်းတက်ပေါ့။
မိုက်နှစ်လုံးနဲ့ လူငါးယောက်က စင်ပေါ်မှာ။ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်က စင်အောက်က စက်ကို အသက်နဲ့ လဲပြီး ကာကွယ်မယ့် ပုံစံတွေနဲ့ စက်ဘေးမှာ နေရာယူပြီး။ စင်ပေါ်တက်လာတဲ့ ကောင်တွေကို မြင်တာနဲ့ အောက်က ကျောင်းသူတွေက သဲသဲလှုပ်ကုန်ကြပြီ။ အားလုံးကလည်း လူဖြောင့်တွေချည်းကိုး ( ကိုယ့် ဘာသာ သတ်မှတ်ထားတာ )။ ဘောင်းဘီတွေ ဘာတွေနဲ့ ၊ ဆိုမယ့် သီချင်းတွေကလည်း ခုနက ဆိုသွားကြသလိုမျိုး " သွားတိုက်ဆေးဘူးလေး ညှစ်ကြည့်ပါကွယ် " တွေ ဘာတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေကြတာကိုး။ ဂီတဆရာလည်း သူပါရောပြီး စင်ပေါ်တက်ရမလိုလို၊ စင်အောက်ပဲ ဆင်းထိုင်ရမလိုလိုနဲ့ လှေကားခုံမှာ ကိုးလို့ကန့်လန့်ကြီး။ သီချင်းက အင်ထရို စနေပြီ။ မျိုးကျော့မြိုင် နေရာကနေ ဆိုမယ့် သူငယ်ချင်းက မိုက်တစ်လုံးကိုင်လို့။ ထူးအိမ်သင်နေရာက ဆိုမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း မိုက်အဆင်သင့်။ တကယ်စဆိုတော့လည်း သူငယ်ချင်းက မျိုးကျော့မြိုင်စတိုင် မပွင့်တပွင့်လေးနဲ့တင် စဆိုတာ။ နောက် ထူးအိမ်သင် နေရာဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်အလှည့်။ နောက် ဘိုဘိုနေရာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း အလှည့်၊ နောက် စည်သူလွင်နေရာ စသည်ဖြင့် အမှားအယွင်းကို မရှိဘူး။
" ကမ္ဘာကို ဆိုက်ကားနဲ့ ပတ်မယ် အာပုံတွေ ၀ယ်စားကြပါစို့ " ဆိုတဲ့ ကောရက်စ်(Chorus) ပိုဒ်တောင် မရောက်သေးဘူး၊ ကလေးတွေရော ကောင်မလေးတွေရော တချို့ ခပ်ငယ်ငယ် ဆရာမလေးတွေပါ အပြေးတပိုင်း လာကြည့်ကြတာ။ စက်ဘီးစတင်း နားက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်း ပြန်ဖို့ ခဏမေ့ပြီး စင်ရှေ့ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ ပြေးလွှားနေတဲ့ ကလေးများကလည်း လာကြည့်လို့၊ နားထောင်လို့။ ရေစင်အောက်မှာ ထမင်းစားနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေတောင် ဇွန်းတန်းလန်းနဲ့ (ထမင်းဗူးထဲမှာ ပြောပါတယ်)။ စပွန်ဆာ သူငယ်ချင်းကလည်း သီချင်းသာမဆိုတာ စင်ပေါ်တက်ပြီး ကင်မရာတကိုင်ကိုင်နဲ့ တဖြတ်ဖြတ် လုပ်လိုက်၊ စင်အောက်က ဆင်းရိုက်လိုက်၊ ဘေးနားက တမာပင်ပေါ်ပဲ မတက်တာ ကျန်တော့တယ်။ ခုလို သီချင်းဆိုရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆိုလို့လည်း ဒီသကောင့်သားတွေပဲ ရှိတာဆိုတော့ အားလုံးက အထူးအဆန်းနဲ့ပေါ့။
အိုက်တင်တွေ အပြည့်နဲ့ အမှန်အကန်ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံး ဖျော်ဖြေသွားတာ။ အားလုံးကလည်း သဘောတွေ ကျလို့ပေါ့ (ကြိတ်ကြွေနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆို လက်ခုပ်တီးတာ လက်တွေတောင် နာတယ်ဆိုပဲ)။ အတန်းပိုင်ဆရာ လူပျိုသိုးကြီးကတောင် " ဒီကောင်တွေ ဒါလည်းဖြစ်တာပဲဟ " ဆိုပြီး ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေသေးတာ။ စက်ဆရာလည်း အိမ်သာထဲကနေ ကိစ္စဘယ်လိုရှင်းပြီး ထွက်လာတယ် မပြောတတ်ဘူး၊ သူ့စက်ဘေးနားမှာ အူယားဖားယား ပြေးလာပြီး ထိုင်ရပါလေရော။ သီချင်းလည်း ဆိုပြီးရော ဆုတော်ငွေလာချ တာတွေကို ဖတ်တယ်။ အံမယ် .. "တကယ့်ကို အမည်မဖော်လိုသူက ဘယ်လောက်ပါ ဘာညာ" ဆိုပြီးတောင် ပါလာသေးတာ။ အမည်မဖော်လိုသူ ဆိုတာတောင် အမည်မဖော်လိုသူ ၁၊ အမည်မဖော်လိုသူ ၂ စသည်ဖြင့် စီနီယာအစဉ်လိုက် လာသေး။ စာရင်းချုပ်လိုက်တော့ ၂ ရက်စာလောက် လက်ဖက်ရည်ဖိုး ကျန်တယ်။ အဲဒီနေ့ကလည်း အိမ်ပြန်ထမင်းမစားကြဘဲ ကျောင်းထဲက ဆရာမတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ အားပေးပြီး ခုံတန်းတွေပေါ်မှာ တရေးတမော မှေးကြတာပေါ့။ အားလုံးကလည်း ပျော်နေကြတာ။ စက်ကိုင်တဲ့ စက်ဆရာကတောင် နောက်နေ့ အလကားဆို၊ ပိုက်ဆံမယူဘူး ဆိုပြီး ဖြစ်လာသေး။
တစ်ချိန်တစ်ခါက " ကျွန်တော်နှင့် ချစ်သောကမ္ဘာမြေ " ရယ်ပေါ့လေ။ ( အောင်မှူး )
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://naylwanthu3.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.